Chipembere - Gandanga/Mavembe Mbira Video Lessons - KalimbaShop
Home	Shop	Online Video Courses	Chipembere – Mavembe/Gandanga Mbira Video Tutorial	Return to previous page
Chipembere – Mavembe/Gandanga Mbira Video Tutorial
This set of video lessons will teach you how to play Chipembere on Mavembe/Gandanga Mbira. These lessons teach the basic part (kushaura), vocals and interlocking part (kutsinhira) of the Chipembere song. In the videos a Mavembe/Gandanga Mbira in G is used, available here. Your teacher is Dingiswayo Juma, Zimbabwean mbira musician and maker.
This set of video lessons will teach you how to play Chipembere on Mavembe/Gandanga Mbira. These lessons teach basic part (kushaura), vocals and interlocking part (kutsinhira) of the Chipembere song. In the videos a Mavembe/Gandanga mbira in G is used, available here. Your teacher is Dingiswayo Juma, Zimbabwean mbira musician and maker.
Be the first to review “Chipembere – Mavembe/Gandanga Mbira Video Tutorial” Cancel reply